Ciidamada Puntland oo fuliyay howlgal ka dhan ah alshabaab iyo Daacish – Damqo
Ciidamadda Badda maamulka Puntland ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyo deegaano ka tirsan gobolada Sanaag iyo Bari kaas oo la sheegay in lagu baacsanayay dagaalyahanada ururada alshabaab iyo Daacish .
Saraakiisha ciidamada booliska Badda Puntland ayaa sheegay inay heleen xogo ku saabsan in daacish ay qorsheyneyso ay gobolka Bari ka fuliso weeraro halis ah oo ay ku qaadeyso saldhigyada ciidamada .
Sidoo kale waxay saraakiisha sheegeen inay heleen xog kale oo ku saabsan qorshe alshabaab ay ku doonayaan inay hub kala soo dagaan xeebaha gobolada Bari iyo sanaag taas oo halis ku ah maamulka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Deegaanada Togga Warbad ,Sanqalooc , Beeraha hays, Jaanka Ceelaayo, Biyo cad, Wadada Habaarwaali iyo Dhagcaan oo dhammaan ka tirsan dhulka xeebta teedsan ee Gobolada Bari -Sanaag ayay ciidamadu ka fuliyeen howlgalkooda.
Saraakiisha ciidamada badda ee howlgalka fuliyay waxay sheegeen inay tageen deegaano badan oo ay alshabaab iyo daacish isaga carareen kadib markii ay ka war heleen inay kusoo wajahanyihiin ciidamada Puntland.
Ururka alshabaab iyo dagaalyahanada ururka Daacish ayaa ku sugan qeybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland oo ay xiliyada qaar ka fuliyaan weeraro qorsheysan.
Previous Garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne oo xirmay iyo dad Bukaano ay ku jiraan oo Baladweyne ku xayiran
Next Wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray Dhuusamareeb